सोच बदलेर शौच बनाइयो त्यो पनी बाढीले भत्कायो ।
रामाधिन सदा भत्केको शाैचालयमा
१० पुष, राजबिराज ।
खेतमा खुल्ला रुपमा शौच गर्ने बानी, बाउँ बाजेले पनी शौचालय भनेको के हो देखेको थिएन क्यारे मलाई नि उहाँहरुले त्यस बारे केही भन्नु भएको थिएन । भन्दै बिष्णुपुर गाउँपालिका (साबिकको गा.बि.स. सिमराहा सिंग्यौन(९) निवासी रामाधिन सदाले बृतान्त सुनाए । कुल १८ जनाको परिवार रहेको सदाले सुनाएको बृतान्त :
कुनै समय मेरो बस्तीमा पनी एउटा शौचालय थिएन । म प्राय कार्य गर्न महिना २ महिनामा भारत तिर जाने गर्छु । म भारत जादाँ मुम्वई वा दिल्ली शहर जाने गर्छु । भारतको राजधानी तथा बिकसित शहर भएको कारणले गर्दा र मैले कार्य गर्ने कम्पनी बजार क्षेत्रमा भएकोले खुल्ला दिसा पिसाव गर्न निकै कठिन हुने गर्थाे । त्यहाँ टायल्स जडित शौचालयहरु रहेका हुन्थ्यो । पहिलो पटक भारत जादा त शौचालयमा दिसा पिसाव गर्न आफुलाई निकै अप्ठ्यारो महसुस भएको थियो । तथापी शौचालयमा दिसा पिसाव गर्दै जादा सजिलो महसुस हुदै गयो । मलाई लाग्छ सायद त्यो समुदायमा सवैले शौचालयको प्रयोग गरेर मैले पनी गर्न पाए र गरे पनी । त्यस्तै म आफनो घर फर्केर आउदा समुदायमा कसैको शौचालय हुदैन थियो तसर्थ म पनी बाहिर नै दिसा पिसाव गर्न मन पराउथे ।
हाल केही महिना अगाडिबाट ओडिएफ भन्ने शब्द सुने । सोध्दा थाहा पाए गाउँहरु खुल्ला दिसा मुक्त हुदैछ । अव बाहिर दिसा पिसाव गर्न दिदैन । सरकारले नै निती बनाएको छ । समुदायमा त्यो थाहा पाएर समुदायका ब्यक्तिहरुले भन्ने गर्थे सरकारले नै चर्पी आएर बनाई दिन्छ हाम्रो गाउँमा पनी आउछ बनाई दिई हाल्छ नी । बनाएदिए पछि दिसा पिसाव गरौला । बनाए दिए पनी हाम्रो त खुल्लामा शौचालय गर्ने बानी रहेको छ शौचालयको प्रयोग कसरी गर्ने होला । केही भएन भने केटाकेटीलाई दिसा पिसाव गर्न लाउछु । कसैले भण्डार कोठा बनाउछु जस्ता अनेक थरिका कुरा गर्ने गर्थे । मेरो पनी बुझाई उनीहरु भन्दा केही फरक थिएन ।
भत्केको शाैचालय देखाउदै रामाधिन सदा
केही दिन पछि हाम्रो गाउँमा पनी खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्रको कार्यक्रम आएको थाहा पाए । र सबल नेपालले कार्यक्रम संचालन गरेको रहेछ । सोही कार्यक्रम अन्र्तगतका कर्मचारी लक्ष्मी चौधरी कर्मचारीको रुपमा हाम्रो समुदाय आए र चर्पी बनाउन आग्रह समेत गरे । हामीले पनी हुन्छ नी त बनाई देउ भने उनले ठाढो बोलीमा खानलाई सरकारले पैसा दिन्छ र ? तिमीहरुलाई हग्नलाई पैसा दिनुपर्ने । भन्ने शब्द बोले यो सुनेर हामीलाई त्यसबेला साह्रै रिस उठ्यो । हामीले तुरुन्त उनको प्रतिवाद पनी गरे । तर उनले सरकारले नै हाल निती लिई कुनै सहयोग नदिई सवैले आफनो चर्पी आफै बनाउने निर्णय गरेको जानकारी गराए । त्यो सुनेर हाम्रो चित्त पनी बुझयो । तथापी हामीलाई चर्पी बनाउन शोच चाहि बदलिन सकेन उनले ।
दिन बित्दै गयो हामी पनी खुल्ला रुपमा शौचालय गर्दै गयौै । एकदिन मेरो छोरा बिद्यालयबाट घर आयो र भन्छ बुवा हाम्रो घरमा पनी शौचालय बनाउनु पर्यो । मैले किन चाहियो शौचालय यति खुल्ला ठाउँ छदै छ किन चाहियो भनेर प्र्रश्न गरे । उसले भन्यो बुवा खुल्ला ठाउँमा हामीले दिसा गर्दा हामीले हाम्रो दिसा आफै खाने गर्छौ । उसले यसो भन्ना साथ मैले रिसाएर उसलाई भने बढी जान्न लागिस पढन लागेर, जे पाए तै कसरी खान्छ आफनो दिसा आफै ?
अनी उसले भन्छ बुवा हामीले खुल्ला ठाउँमा दिसा गरे भने त्यहाँ झिंगा लाग्छ नै, किन भने झिंगालाई मन पर्ने खाना भनेकै दिसा हो । तसर्थ खुल्ला ठाउँको दिसा खान झिंगा गएको बेला उसको खुटामा दिसा लाग्ने गर्छ र हामीले झिंगा सानो भएकोले उनको खुटामा लागेको दिसा देख्न पाउदैनौ तसर्थ झिंगा खानामा बस्यो भने खानामा लागेको दिसा पनी हामीले नदेखि अनजानमा दिसा खाने गर्दर्छौ । यसो भनेपछि मलाई बास्तवमा दिसा खाको अनुभुति भयो । अनि मैले उसलाई भने हुन्छ बावु अव हामी पनी शौचालय बनाउने केही दिन पछि पैसा भएपछि ।
केही दिन पछि फेरी मेरो छोराले बुवा अव चर्पी बनाउनै पर्छ । चर्पी मान्छेलाई नभई नहुने कुरा रैछ बनाउनुस न बुवा भने अनि मैले हुन्छ बावु अव बनाउने भन्दै गफ टाले । फेरी छोराले भन्छ बुवा अव बाहिर दिसा पिसाव गर्न हुदैन । हाम्रो स्कुलको बालक्लबमा म पनी छु । हाम्रो बालक्लबले नै निर्णय गरेको छ । बाहिर दिसा पिसाव गर्ने ब्यक्तिलाई सिटी बजाएर लाज लगाउने । हामीले बनाइनौ भने मेरो त बेजतै हुन्छ बुवा । यो सुनेर मैले हैन अव त बनाउनै पर्छ भनी ठाने र आफै चर्पी बनाउन पनी शुरु गरे चर्पी किन यता उताको बनाउने पक्की नै बनाउने निर्णय गरे र बनाउन शुरु परि गरे । चर्पीमा छाना लगाउन मात्र बाकि थियो २८ गते बिहान ४ बजे तिर घर भरि एकासी पानी आयो । पानी आएपछि हामी सवैजना तर्सिए पानी कमरसम्म आई पुगेको थियो । हामी जसो तसो खाटमा उभिएर आफुलाई जोगाए भने छोरालाई चाहि मैले बोकेको थिए । पानी रुकने कुनै छाट काट नै देखिन दिउसो तिर पानी रुकेपछि बाहिर एकछिन के गाको मैले सोच बदलेर बनाएको शौचालय झवाम्मै झर्यो । घर फुसको भए पनी शौचालय पक्कीको बनाएको थिए । एक पटक बनाएपछि बर्षौ ढुक्क हुन्छ भनी बनाएको शौचालय भाचिएपनि मेरो मन र मेरो शोच भाचिएको छैन । मैले चर्पी बनाउन आँट गरेको छु, म बनाउछु नै । मेरो कारणले मेरो छोराको बदनामी हुनु ठिक होईन । चर्पी सवैलाई आवश्यक कुरा हो । मेरो बस्तीमा पनी सवैले अहिले चर्पी बनाइ सकेको छ । चर्पी नभएको कारणले बाढीमा समेत मलाई चर्पी गर्न गाह्रो भएको थियो । चारै तिर पानी भएकोले जता दिसा पिसाव गरे पनी आफनै घरमा बगी आउने भएको तथा साँप किराको समेत डर भएकोले चर्पीको आवश्यक्ता मलाई अझ महसुस भएकोले चर्पी बनाउन कमर कसेको छु र केही दिनमै आर्कषक चर्पी म बनाउछु आएर सरहरु हेर्नु होला भने ।
(यो लेख तयार पार्दासम्म निज रामाधिन सदाले आफनो चर्पी समेत बनाई सकेको र सिमरा सिंग्यौन बासिले समेत एक घर एक चर्पी बनाई जिल्ला सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले समेत खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणाको लागि हरियो झण्डा दिई सकेको अवस्था रहेको छ ।)
लेखक सबल नेपालका काेषाध्यक्ष अायुश श्रेष्ठ हुन।